Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Magaalada Muqdisho – Great Banaadir
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Magaalada Muqdisho
Wararka ka imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Dowladda Soomaaliya ay galabta dib u furtay wadooyinka magaalada, kadib saacado badan oo ay xirnaayeen.
Ciidamada Dowladda ayaa saakay lagu soo daadiyay wadooyinka Magaalada Muqdisho, iyagoona hakad-geliyay dhaqdhaqaaqii gaadiidka ee magaalada.
Ciidamada ayaa waxaa la arkaayay iyagoo buux-dhaafshay wadooyinka, gaadiidkana u diidaya in ay wadooyinkaasi adeegsadaan.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya in saacadihii dambe ee maanta dib ciidamada looga kaxeeyay wadooyinka, iyadoo markaasi lagu celiyay xarumaha ay ku leeyihiin magaalada.
Muddadii ay wadooyinka xirnaayeen ayaa saamayn ku yeeshay ganacsigii magaalada, waxaana ganacsatada qaarkood lagu khasbay in ay lug ku taggaan xarumahooda ganacsi, oo goobo fog fog ku yaala, halka intii kalana ay door bideen in ay guryahooda iska jooggaan.
Waxaa xusid mudan in Ciidamada Dowladda ay maanta xireen inta badan wadooyinka soo gala, kana baxa Xaafadda Buulo Xuubey ee Degmada Wadajir, halkaasoo ay degan yihiin Golaha Midowga Musharaxiinta qaarkood. Ciidamada ayaa dadka degan xaafadaasi u diiday in ay guryahooda ka soo baxaan.
Tani ayaa waxaa si kulul u cambaareeyay Golaha Midowga Musharaxiinta, iyagoona tallaabadaasi ku sheegay mid iyaga lagu daandaansanayo.
War ay soo saareen ayay ku sheegeen in dhawr jeer oo hore ay ka diggeen in Ciidamada Qaranka loo adeegsado ujeedooyin gaar ah, iyagoona ciidamada ugu baaqay inaanan loo adeegsan caburinta iyo dhibka shacabka. Musharaxiinta ayaa warka ku sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu qaadi doono masuuliyadda wixii ka dhasha daandaansiga ay sheegeen in lagu hayo iyo weliba kicinta xaaladda colaadeed ee amniga dalka lagu qalqalgelinayo.
Tallaabadii maanta lagu xiray wadooyinka ayaa loo fasirtay mid ay dowladda kaga hortageysay bannaanbaxyo maanta lagu waday in ay Caasimadda Muqdisho ka dhacaan.
Iskusoo wada-duuboo Dadweynaha Reer Muqdisho ayay maanta u ahayd mid ka mida maalmihii ugu adkaa, intii wadooyinka magaalada la xiraayay. – Universal TV Somali